Sunday, 04.05.2020, 03:36pm (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 07.10.2018, 02:32pm
आजका बालबालिका प्रकृतिसंग हैन, प्रविधिसंग निकट छन् । यो उनीहरुको स्तारोन्नति र बौद्धिक क्षमता विकासमा ठूलो अबरोध हो । प्रविधिको उपयोग ज्ञानप्राप्तिका लागि नभएर समय कटाउनका लागि बाध्यकारी साधन भएको छ ।
Tuesday, 06.12.2018, 03:20pm
प्रजातन्त्रले समाजलाई उत्तरदायी बनाउँछ भनिन्छ । समाजलाई बाटो देखाउने दायित्व नेताको हो । जनतालाई ढाँटेर भ्रममा पार्ने काम नेताले गर्नु हुँदैन । तर, यहाँ नेता नै उत्तरदायी नभएर मनलागी बोल्छन् र गर्छन् भने प्रजातन्त्रप्र्रतिको जनविश्वास नै डगमगाउने स्थिति आएँछ । संसदीय व्यवस्था जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था हो ।
Tuesday, 06.12.2018, 03:19pm
यता सिण्डिकेटको चक्रव्यूह तोड्ने राज्य (सरकार)ले प्रयास गर्दै थियो, उता सत्ताबाट विस्थापित भएको नेपाली काँग्रेसभित्र “सिण्डिकेटिज्म व्यापक गर्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अगाडि बढ्दै गरेको” भनेर स्यालहरुको रोइलो मच्चिन शुरु भइरहेको थियो । त्यसो त सत्ता र शक्तिबाट बाहिर हुँदा कुनै दल र नेताले हर्ष बढाई गरेका थिएनन्, गर्दैनन् ।
Wednesday, 05.30.2018, 04:38pm
झण्डै पौने दुई सय वर्षअघि अब्राहम लिंकनले– “असल शासकले सुदूर भविष्य हेरेर काम गर्छन् भने केबल राजनीति गर्नेहरुले आउँदो निर्वाचनलाई मात्र सोचेर काम गर्छन्” भनेका थिए । उनको त्यो भनाई आज पनि व्यवहारमै देखिदै आएको छ । आज त अझ सोझासिधा जनतालाई भ्रममा पार्ने जादूगरका जस्ता चमत्कारी भाषण गर्नेहरुले त्यस्तै कपटी काम गर्दैआएको देखिन्छ ।
Wednesday, 05.30.2018, 04:37pm
समुद्रमा सानो ढुंगा तैरिएपछि सानै तरंग आउँछ, ठूलो जहाज पार भएपछि त्यही अनुसारको छाल आउँछ । त्यो स्वाभाविक हो । विश्व इतिहासले दिएको शिक्षा त्यही हो । हरेक महिना र वर्षमात्र होइन, दशक र शताब्दीमा प्रत्येक राज्यमा करोडौं अर्बौ मान्छे जन्मिन्छन् । जीवन र जगत् भोग्छन् । पुनः आ आफ्ना पारिवारिक सामाजिक क्षितिजबाट अस्त भएर जान्छन् । तर केही कोही विरला कोटीका व्यक्ति जन्मिँदा त सबै सरह भएर जन्मिन्छन् ।
अपराधीलाई अभय ः सज्जनलाई सकश
Tuesday, 05.08.2018, 11:00am
नेताहरु या त स्वयं भ्रममा छन् या कतैबाट निर्दिष्ट भएर आँखा चिम्लन्छन् । जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, मधेशी आदि केके नाम लिएर उनीहरुलाई राज्यले वर्षौंदेखि शोषण–दमन गरेको भनेर भाषण सुनाउँछन् । तर यथार्थ के हो भने शोषण गर्ने त तत्तत् जाति र वर्गका ठूलाठालू र तिनै भाषण गर्नेहरु नै हुन् । शोषित–पीडितका लागि भनेर राज्यका तर्फबाट छुट्याइएका सुविधा समेत तिनै ठूलाले उपभोग गरेका हुन्छन् । त्यसैले सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता त ग्रामीण ठालूका शोषणबाट तल्लो तहलाई जोगाउनु हो ।
Tuesday, 05.08.2018, 10:59am
समयसँगै परिवर्तित हुँदै गएको समाजमा जटिल समस्याहरुबाट जेलिएका व्यक्तिहरुले कहिले काहीं ‘विवेक शून्य’ भएर अपराधजन्य क्रिया कलाप गर्ने कुरा असामान्य होइन । कहिलेकहीं कुनै व्यक्तिका त्यस्ता काम कुराबाट समाजका अन्य सदस्य (व्यक्ति, परिवार)को ‘संविधानतः प्राप्त हक अधिकार’को हनन हुने गर्छ ।
Tuesday, 04.24.2018, 01:16pm
Tuesday, 04.24.2018, 01:14pm
Thursday, 04.12.2018, 11:22am
आजको एक्काइसौं शताब्दीको समाज समयभन्दा अस्वभाविक रुपमा पतनोन्मुख बाटोमा तीव्रतर गतिमा दौडिरहेछ । यसरी वृद्धि हुनुका पछाडि उही “समाजमा बढ्दो उपभोक्तावादी प्रवृत्ति र आडम्बरवादी सामाजिक प्रतिस्पर्धा, त्यस अनुपातमा साधन स्रोतको न्यून वा नगण्य आपूर्ति, विश्वका संभ्रान्त देशहरुको फेशन, जीवनशैली, यौन स्वतन्त्रताको भद्दा नक्कल गर्ने विकृतिपूर्ण नयाँ संस्कृति, नेपाली समाजको मौलिक परम्परा मान्यताप्रति हीनताबोध गर्ने शिक्षा दिने पश्चिमा नीतिको घनीभूत हुँदै गएको प्रभाव, नैतिक शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि नै गरिएको खारेजी” पनि मुख्य कारण मानिन्छ ।
Tuesday, 04.03.2018, 01:38pm
दलका नेता जनताको तल्लो तहसम्म पुगेर उनीहरुका दुःखसुखमा सामेल भएर काम गर्दैनन् । अनि चुनावका मुखमा केही हुल्याहा, छुल्याहा, फटाहा, धनका मोटा, डन, तस्कर, व्यापारी, कमिशनखोर, ठेकदार जस्ता समाजका धमिरालाई साथ लिएर यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्दै जनतालाई भ्रममा पारेर चुनाव जितेपछि जनतालाई केर्के आँखाले पनि हेर्दैनन् ।
Tuesday, 04.03.2018, 01:37pm
“विधि”को अर्थ र परिभाषा “अष्टिन्” र “बुडरो”ले कसरी गरेका थिए, त्यो भन्दा प्रो. हलैण्डको परिभाषा कति फरक थियो, तीमध्ये कस्को कुन परिभाषा ठीक हो ? त्यसबारे यहाँ व्याख्या गर्न र अथ्र्याउनु छैन । “विधिको शासन” भनेपछि “समाजले के कस्तो सामाजिक परम्परा, सद्भाव, परिवेश सापेक्ष रितिथितिको अपेक्षा गरेको छ, के कस्तो व्यवहार हुनु गर्नु अवाञ्छनीय ठानेको छ, त्यसको प्रतिविम्ब राज्यको शासन प्रशासनमा देखिनुपर्छ” भन्ने हो ।
Tuesday, 03.27.2018, 12:15pm
चरित्र, निष्ठा र इमानदारी–राजनीतिलाई स्वच्छ राख्ने र राष्ट्रलाई पथप्रदर्शन गराउने मूलतत्व हुन्छन् । तर, निकै वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा यी तीनै तत्वको वेवास्ता भएको छ । जुनसुकै उपायबाट भए पनि व्यक्ति (आफू) सम्पन्न बन्ने र देश–जनताका समस्यालाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति सत्ता र प्रतिपक्षा दुबैमा आफ्नो गच्छेअनुसार प्रवलरुपमा देखापरेको छ ।
“विधिको शासन पुनःस्थापना” गर्ने सवालमा
Tuesday, 03.27.2018, 12:14pm
कुनै पनि राज्य विधि–विधान, ऐन, कानुन, नीति नियमका आडबलमा चल्छन् । हरेक वैधानिक रूपमा शासन सत्तामा आउने सरकारले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दै ती प्रचलित संविधान, ऐन, कानुन, नियमको पूर्ण पालन गर्ने संकल्प गरेको हुन्छ र आम नागरिकहरूलाई पनि पालन गर्न लगाउँछ । सरकार र नागरिकहरूले राज्यद्वारा स्वीकृत विधि विधान ऐन कानुनको परिपालना गर्नु अनिवार्य र बाध्यात्मक दायित्वमा पर्छ ।
Tuesday, 03.27.2018, 12:13pm
Tuesday, 03.20.2018, 11:02am
“भ्रष्टाचार र घुसखोरीलाई सामाजिक मान्यता प्राप्त आचरण एवं व्यवहारका रूपमा अंगीकार गरेका कारणले यो फस्टाउने गरेको हो । चारजना भेला भएका ठाउँमा भ्रष्टाचार एवं घुसखोरीका बिरूद्ध कुरा उठाउने गर्छ, तर ती कुरा गर्नेहरू नैघुस लिनेदिने एवं भष्टाचार गर्ने क्रियामा सशक्त रूपमा संलग्न हुन्छन् ......। जो भ्रष्टाचारी र घुसखोरी छन् तिनै यसको नियन्त्रण गर्ने तहमा छन् ।
अध्यात्मिक नेता र राजनेतामा गुणवत्ताको हिसाबले आनको तान फरक देखिने कारण आध्यात्मिक नेता कालजयी हुन्छ– राजनेता क्षणिक । स्थापित आध्यात्मिक नेताको स्थान सदा सुरक्षित हुन्छ । यो स्थानबाट ऊ विस्थापित हुँदैन । राजनेताको स्थान यसरी सदा सुरक्षित हुँदैन । उसलाई विस्थापित गरेर अर्को राजनेताले आफ्नो अस्तित्वबोध (केही समयका लाग) गराउँछ ।
Tuesday, 03.20.2018, 11:00am
नेपालको न्यायिक भनौं अथवा अदालती इतिहासमा निकै गर्व र सम्मान गर्नु पर्ने व्यक्तिहरु धेरै देखा परेका थिए । अनिरुद्ध प्रसाद सिंह (जो सय वर्षको नेटो काट्दै आजसम्म जीवित छन् ।) भगवतिप्रसाद सिंह, वासुदेव शर्मा जस्ता पुरानो पिंढीका मात्रै होइनन्, पछिल्लो पुस्ताका कल्याण श्रेष्ठ, रामप्रसाद श्रेष्ठ र निवर्तमान सुशीला कार्कीसम्मले नेपाल र नेपालीको मान सम्मान पाएर निवृत्त भए ।
अबको स्थायी शक्ति केन्द्र काठमाडौं ! (?)
Tuesday, 03.06.2018, 02:39pm
राणा अघिवशवादी शासन सत्ताका “उन्नायक” जंगबहादुर राणाका पूर्ववर्ती नेपालका शासन सत्ता नियन्ताहरुले अंग्रेजी साम्राज्यवादीका विरुद्ध लडेर आफ्नो राष्ट्रको सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको सुरक्षा गरेका थिए । त्यति मात्र होइन– आफ्नो राज्य विस्तार गर्दै टिष्टादेखि नालापानी, काँगडा र सतलतसम्म पुगेको इतिहास अझै जीवित छ ।
» आयातित संघीय व्यवस्था एउटा कोक्याउने पीडालु
» ०१७ मा महेन्द्र–वीपीको टक्कर र ०७४ मा खड्ग ओलीको उदय
» अब त विधिविधान संविधानको लाशमा दागबत्ती दिने कि सभापतिज्यू ?
» नेपालको राजनीतिमा फागुन महिना हरेक परिवर्तनको मूल ढोका
» जताततै अव्यवस्थाको तमासे जात्रा
» संघीय प्रणालीको भविष्य प्रदेश सभा सदस्यको हातमा
» थरीथरीका मतदाता, मतदानको प्रयोजन र प्रतिनिधित्व
» स्थायी समाधान खोज्ने कि सधैं टारटुर मात्रै
» जनता भन्छन् “नागा, नेता र न्यायकर्ता उस्तै उस्तै !”
» परिवर्तन ‘दौैरा न साराको खल्ती’ भयो
» प्राचीन हिन्दु अधिराज्यका विविध शासन प्रणाली (२)
» मुद्दा नै लड्ने भए जन अदालत जाउँ !
» प्राचीन हिन्दु अधिराज्यका विविध शासन प्रणाली
» गोलचक्करमा राष्ट्रपति ः निकास के ?
» नदुखेको टाउको डोरीले बाँधेर दुखाइदैछ
» पहिले आफैंलाई चिन अनि अरुलाई !
» राजनीति किन सधैं सत्ता र सम्पत्तिमा केन्द्रित ?
» “निर्लज्ज त थियौ नै, निर्वस्त्र पनि नभई देउ न !”
» अविवेकी निर्णयको परिणाम ...
» अजेय जनता जिन्दावाद (२)
Page 3/21: « 1234567 ... :: »